Tsy mampianatra ny fiankohofana amin'ny zavaboahary ny Genesisy (Gen. 1:14-19)
Tsy miankina aminny tantara namboamboarina avy aminny fivavahana hafa tarninny a.ndronny Baiboly ny Genesisy raha miresaka mikasika ny Famoronana. Nanoratra io boky io i Mosesy mba hanehoana ny fahadisoan'ireny anganongano ireny ary koa hanehoana fa Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ny tany.
Vakio ny Gen. 1:14-19. Inona no noforonin'Andriamanitra tamin'ny andro fahefatra? Inona ny asan'izy ireo, araka ny fanazavanli Mosesy?
Tsy nosoratan'i Mosesy ny teny hoe "masoandro" sy "volana". Azo antoka fa nataony mihitsy izay tsy hanoratana izany satria ny anaran'izany arninny teny hebreo dia manondro ny andriarnanitra masoandro sy volana nivavahanny oIona tany Proche-Orient sy Egipta taminny andron'ny Baiboly.' "Fanazavana lehibe" no niantsoany ny masoandro (Gen. 1:16), ary "fanazavana kely" kosa ny volana. Maneha amintsika ireo anarana ireo fa noharian'Andriamarlitra hanao asa manokana ny volana sy ny masoandro. "Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany, sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina" Gen. 1:17,18. Asehon'ireo andininy ireo arnintsika rnazava fa tsy andriamanitra ny masoandro amam-bolana fa zavatra nohariana mba hanao asa manokana.
Vakio ny Gen. 2:7, 18-24. Ahoana no ifandraisan'Andriamanitra akaiky dia akaiky amin'ny famoronana an'i Adama sy i Eva?
Ambaran'ilay tantara tany Proche-Orient fa nanao ny olombelona ireo andriamanitra mba hanamaivana azy amin'ny asa mafy tokony hataony. Tsy miombon-kevitra amin'izany anefa ny Baiboly, izay mampianatra fa nanao ny olona Andriamanitra mba hanapaka ny tany.
Asehon'ny Genesisy antsika ny fahamarinana momba ny niandohanny fiainana, izay manampy antsika hanitsy ny hevi-diso sy ny finoan-diso tamin'ny andro fahiny. Nampiasa teny sy hevitra tsy miombona amin'ny hevi-diso ny amin'ny niandohan'ny fiainana i Mosesy ao amin'ny asasorany. Ahoana no nanaovany izany? Niresaka momba ny asan'Andriamanitra sy ny drafiny ho an'ny olombelona raha namorona azy ireo izy.
An-jato taona maro lasa izay, dia nanohitra ny hevitry ny ankamaroan'ny olona tamin'izany fotoana izany ny tantaran'ny Baiboly mikasika ny farnoronana. Amin'izao andro izao dia mbola manohitra izay heverin'ny ankamaroan'ny olona ho niandohan'ny fiainana hatrany ny Baiboly. Nahoana isika no tsy tokony ho gaga amin'izany?